မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XI | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XI
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XI
၁။ ဧရာဝတီခမ်းမယ် ဆိုတဲ့ FaceBook ဖေ့ဘုက်က ကွန်မန့်ရေသားချက်တွေကို၎င်း၊
ဧရာဝတီခမ်းမယ်၊ လူတွေရေငတ်မယ်၊ ကန္တရဖြစ်မယ် ငတ်ပြတ်လိမ့်မယ်၊ဒုက္ခရောက်မယ်၊
မြစ်ကြီးစီးဆင်းပါစေ စသဖြင့်ကွန်မန့်ရေးတုန်းပါဘဲ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားတယ်)
အဖြူလား အမဲလား၊ ဘယ်ကွေ့မှာလား ညာကွေ့ မှာလား တည့်တည့်သွားမှာလားဆိုလောက်အောင်
manadalaygazette.com/224996 မှာ ၎င်း၊
ဒီကိစ္စ ကိုတော်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ တယ်၊
မြစ်ဆုံရေကာတာ က ဧရာဝတီမြစ်ရေအားလုံးကို အသေပိတ်တာမဟုတ်၊
ရေတွေကိုကာပေမဲ့ ရေတွေအမြင့်တခုရောက်ရင် လွှတ်ချရတယ်၊
(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက ရေကာတာတွေမှာ ရေစီးဆင်းမြဲ စီးဆင်းနေတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပါ)
(ပုံကို Click ကလစ် တချက်နှစ်ချက်လောက်နှိပ်ရင်ပုံကြီးကြီးကြည့်နိုင်တယ်)
လှော်ကားကန် ဂျိုးဖြူကန်ကရေတွေကိုရေတိုင်ကီပေါ်တင်ပြီး ရေကို
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်ဘို့ရေကာတာက ရေလွှတ်လို့ရေတွေကဆက်ပြီးစီးဆင်းရမှာပါ၊
လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်ဘို့မလိုတဲ့အခါ ရေ ကိုအမြဲအလုံ ပိတ်လှောင်ထားရမယ်ဆိုတာ
ပုံသေကားချလဲမဟုတ်ပါ၊ တခါတခါ ရေလွှတ်ရပါတယ်၊
ရေသိပ်များရင်လဲ ရေတွေလွှတ်လိုက်ရတယ်၊အတိုင်းအတာတခုထိ (ဥပမာ ၅ %
၁၀%) ဘဲ ရေလိုတာပါ၊
နွေရာသီ ခြောက်သွေ့ချိန်မှာ က ရေသွားလမ်း ပိုအဆင်ပြေအောင်နဲ့
သောင်မထွန်ရအောင် ရေတွေကိုလိုသလောက် ရေပိုလွှတ်ပေးလို့ရ၊
မိုယ်:ကြီးချိန်မှာ အောက်ခြေ မန္တလေး မကွေး မြစ်ဝကျွန်း ရေမကြီးရအောင်
ရေမလွှတ်ဘဲ အလိုက်အထိုက် ဝိုင်းထိန်းလို့ရ
ဒီလို ရေ”သမ” ပြီး စီးဆင်းလာတဲ့အတွက် အချို့နေရာမှာတသီးစာမှ နှစ်သီးစာ စိုက်လို့ရနိုင်လိမ့်မယ်၊
ပြေးခုန်ပစ်က တန်းကျော် ခုန်ပြီးပြေးကြရာမှာ အဟန့်အတား တွေကိုချထားရတယ်၊
လျှပ်စစ်ထုတ်ဘို့ရာ ရေစီးဆင်းမှုကိုယာယီအားဖြင့် ဟန့်တား ရတယ်၊
ရေတွေကTurbine တာဘိုင်ကိုလည်စေပြီးနောက် အောက်ခြေဘက်ကို ခါတိုင်းလို
ရေတွေအမြင့်ကနေအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆင်းနိုင်ဘို့ရေ “ကာ” လိုက်တာပါ၊ နောက်ဆုံးကျတော့
ရေကတသွင်သွင်စီးဆင်းလို့ ဧရာဝတီ က မခမ်းခြောက်နိုင်ပါ
(ရေစီးဆင်းပုံတွေကိုလဲClick ကလစ် တချက်နှစ်ချက်လောက်နှိပ်ရင်ပုံကြီးကြီးကြည့်နိုင်တယ် ရေတွေ
အရှိန်ပြင်း ရေတွန်းအားကိုအသုံးပြုပြီးလည်ပတ်တဲ့ နော်ဝေ၊ဆွစ်စာလန်၊အာဂျင်တီနာ က
လျှပ်စစ်ထုတ် Turbine တာဘိုင် တွေပါ၊
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမိုယ်းရေနှင်းရေကနေ ရေမြောင်းချောင်းအိုင်ရေကန်မြစ် သမုဒ္ဒရာ ဆီသို့ရေတွေစီးဆင်းကြတယ်၊
တဖန် အပူငွေ့ပြန်လို့မိုယ်းတိမ်တွေဖြစ်၊ မိုယ်းတိမ်ကနေမိုယ်းးရေတကျော့ပြန်လည်ပတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပါ၊
ဆိုလိုတာက နှစ်စဉ် ရေအားရမယ်၊( ရေနံဓာတ်ငွေ့လို)၊ငွေကုန်ကျခံပြီးဝယ်ခြမ်းနေဘို့မလိုပါ၊
ဆက်လက်စီးဆင်းပြီးလေလွင့်မဲ့အတူတူ၊ ၎င်းအသစ် ရေတွေကနေလဲယူမှာပါ၊
ဧရာဝတီရဲ့ ၅ % ၁ဝ % ဘဲရှိမယ်
ဧရာဝတီမခမ်းနိုင်ပါ။ဒီကြားမှာ ကြောင်ပါး တွေက သိသိနဲ့စွပေး ဖွပေး နေကြ တာ ပါ၊
၎င်း “ရေအား မှလျှပ်စစ်စွမ်းအား (ရွှေဖြူ) ကို “အခမဲ့” လိုလို ရလိုက်တာပါဧရာဝတီ ရေမကုန်ခမ်း မခြောက်သွေ့ရပါ၊ ၎င်းအပြင်
မကုန်ခမ်းနိုင်တဲ့ရွှေတွင်းကြီး (ပဒေသာပင်ကြီး) မှ ရေအားလျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုနှစ်စဉ်ရမယ်၊
မြင်သူဖော်စား မမြင်သူကျော်သွား၊ဆိုတာ ရှေးဆိုရိုးရှိတယ်နော်
ဒီ အကြား မှာ
မရှုစိမ့်တဲ့ကြောင်ဝတုတ်ကြီး “ဖွ” ပြန်ပါပကောလား?
ဧရာဝတီ ခမ်းခြောက် မယ်ဆိုပြီး စာကလေးချောက် လို တတွတ်တွတ်
လွယ်လွယ်လေးပါ အနောက်နိုင်ငံငံက ကိုယ့်ဆရာကြီး
အလုပ်မလုပ် ပါးဆပ် နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆရာကြောင်
ပုံခပ်ကြီးကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် ကြိုက်ရာပုံကို click ကလစ် တချက် နှစ်ချက်နှိပ်ပါ
အရှိန်ပြင်းပြင်း ဒလဟော ရေစီးဆင်းနေတာကိုတောင်မျက်ကွယ်ပြုကာ လိုက်”အာ” နေတဲ့
ကြောင်ပါးတွေ “လွတ်” “တော်” တယ် နော်၊
အခြားနိုင်ငံရောက်လို့ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မသိနားမလည်သူတွေကို မငဲ့ညှာ မထောက်ထားနိုင် “ဘဝ မေ့” နေပုံရတယ်၊
အခြားနိုင်ငံက လျှပ်စစ်ထုတ်ရေကာတာ ကိုထပ်ပြီးတင်လိုက်တယ်၊ရေတံခွန်
မြန်မာပရိသတ်အပြင်ကမ႓ာ့ပရိသတ်ဆီက ဝင်ကြေးသန်းချီပြီး ရပါအုန်းမယ်၊
တောင်ကမ်ဘားက ခပ်မြင့်မြင့်၊ မြစ်ငယ်အင်အား နှစ်သွယ်ဆုံစည်း ပေါင်းစပ်တဲ့မြစ်ဆုံတို့လိုနေရာမျိုး
က ရေအားပြင်းလို့ ရေအားလျှပ်စစ်အများဆုံထုတ်နိုင်တယ်၊ယျေဘုယျ အားဖြင့်ဆိုရင် အခြား
သာမန်အမေရိကန် လျှပ်စစ်ထုတ် ရေကာတာတို့ထက်တောင် မြစ်ဆုံ ရေကာတာ က ၁ဝ ဆ ကျော်
ဘယ်မှာလဲ ခမ်းခြောက် တာ? သက်သက် လိမ်ညာတာ
သူများ ထောင်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက် ယောင်ပြီ လိုက်အော်
US ကရေကာတာ ၇၅၀၀၀
၁၀၀ဝ မှာ ၃.၅၆ (၃ လုံး ခွဲ) ဘဲ (၀.၃၅၆%)
( ရေကာတာ ဒီလောက်များတာ ၇၅၀၀ဝလုံး၊
အော်နေတာ မ ကြားရ ပါ)
Brazil ဘာရဇီ ရေကာတာ (ရေစီးနေတာပါ)
တရုပ်ပြည် Gezhou အရပ်က ရေကာတာ (ရေအားပြင်းလေ လျှပ်စစ်စွမ်းအား
များများထွက်လေ၊ ရေ တအားစီးဆင်း /ထုတ်လွှတ်နေတယ်)
တောင်ကမ်ဘား ခပ်မြင့်မြင့် မြစ်ငယ် နှစ်သွယ်ဆုံစည်းတဲ့မြစ်ဆုံတို့လို ရေအားပြင်း
Australia ရေကာတာ များ
ဘယ်မှာလဲ ခမ်းခြောက် တာ?
Norway ရေကာတာ များ
တောင်ကမ်ဘား ခပ်မြင့်မြင့် မြစ်ငယ် နှစ်သွယ်ဆုံစည်းတဲ့မြစ်ဆုံတို့လိုနေရာမျိုး
က ရေအားပြင်းလို့ ရေအားလျှပ်စစ်အများဆုံထုတ်နိုင်တယ်၊
လက်မခံသင့်လို့ ထင်တယ်ဗျ မြစ်ဆုံကိုရေကာတာဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် အောက်ပိုင်းက
ပြည်သူတွေ ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ လူတွေငတ်ပြတ်ကုန်မှာပေါ့
ဧရာဝတီဆိုတာလဲ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ် လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး
မြစ်ကြီးရဲ့ သက်တမ်းက နှစ်သန်းပေါင်းစွာကြာခဲ့ပြီဆိုလားပဲ သက်တမ်း ရင့်မြစ်ကြီးကို
(ခုန်တန်းကျော် ပြေးတာ နဲ့ ရိုးရိုးပြေး တာ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ပြေးရတာပါဘဲ၊ထို့အတူ
လျှပ်စစ်ထုတ်ရေကာတာ ကရေတွေ နဲ ရိုးရိုးမြစ်ချောင်းက ရေတွေလဲ ရေစီးဆင်းကြရတာပါဘဲ၊
မလှုပ်မရှား လှောင်ထားတာမျိုး မဟုတ်ပါ၊ ခမ်းခြောက်တယ်ဆိုတာ လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်ရပါ )
သဘာဝ အော်သံငိုသံ မြည်းကြွှေးသံ မင့်တို့ရင်ထဲ..
သဘာဝ အော်သံငိုသံ မြည်းကြွှေးသံ မင့်တို့ရင်ထဲ
ဧရာဝတီမြစ်ကဘာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောတဲ့ ငါတို့ရခိုင်ဒေသနဲ့တော့ ပြဒါးတလမ်းသံတလမ်းဘဲ
Swiss ကရေကာတာ အချို့ အပန်းဖြေစခန်းလုပ်ပြီးအပိုဝင်ငွေရှာ၊၊
Bungee Jumping ရေကာတာ ထိပ် အမြင့်ကနေခုန်ဆင်းတာကိုစီစဉ်ပေးတယ်
စွစ်နိုင်ငံ ကရေကာတာ ၂၁၇
လုံးရေအားဖြင့်မြန်မာရဲ့ ၈၁ %
မြေဧရိယာအားဖြင့်မြန်မာရဲ့ဝ.၀၆ % (၁၆ချိုး တစ်ချိုး သာ)
မိခင် ဧရာဝတီ စီးဆင်းပါစေ
မြန် မာ ပြည် သူ တွေ သောက် သုံး မယ့် ရေ ကို ပိတ် ပင် တား ဆီး တဲ့ လူ မှန် သ မျှ
မြန် မာ ပြည် သူ တွေ ရေ သုံး ခွင့် မ ရ သ လို သူ တို့ လည်း ဒီဘဝ မှစ ပြီး သံ သ ရာ
အ ဆုံး အ ထိ ရေ သောက် သုံး ခွင့် မ ရ တဲ့ ရေ ငတ် သူ များ ဖြစ် ပါ စေ
South Africa ကရေကာတာ အချို့
ရေခမ်းမယ်ဆိုပြီး သူမြားက ချောက်လို့အလကားနေရင်းထိုင်ရင်းအတွေးခေါင်နေတာ
Philippines ဖီလစ်ပိုင် ရေကာတာ
Africa Uganda ယူဂန်ဒါ က ရေကာတာ
UK က ရေကာတာ
UK ယူကေနိုင်ငံ ကရေကာတာ ၂၁၂ဝ
လုံးရေအားဖြင့်မြန်မာရဲ့ ၇၉၄.၀ဝ % ရှစ် ဆ
မြေဧရိယာအားဖြင့်မြန်မာရဲ့ ဝ.၃၆ % ဘဲ (၃ချိုးတချိုး)
အာဖရိကတိုက် Zimbabwe ဇင်ဘာဘွေ က ရေကာတာ
မွဲတေတဲ့နိုင်ငံမှာတောင် ရေကာတာ လုပ်ရတယ်
လျှပ်စစ်ထုတ်ရေကာတာ က ရေတွေ ကို အလုံပိတ်လို့ အောက်ခြေက
ခြောက်သွေ့ပြီးရေခမ်းသွားမယ် ဧရာဝတီကိုကယ်ကြပါ လို့ ကြွေးကြော်သူတွေက
ရေခမ်းမယ် ဆိုတဲ့ ငါတို့ရဲ့စွဲစွဲမြဲမြဲ ခံယူချက်အတိုင်း လျှပ်စစ်ထုတ်ရေကာတာ တခုခု ရှေ့မှာ
ငါတို့သွား ရပ်ပြ နိုင်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား? လူတွေပိုယုံရအောင်ပေါ့လေ၊
ဟဲ့ဟဲ့၊ ပြောကာစဘဲရှိသေး၊ လူတွေဘယ်လစ်ကုန်ပြီလဲ?
ဘာသာကျမ်းကို ပြန် ညွှန်းနိုင်တာက
manadalaygazette.com/224008 မှာ သောင်တင် တာ ကို ရှင်းပေးတဲ့ သင်္ဘော တွေ အကြောင်း တင်ပြခဲ့တယ်၊
ရေကာတာ မလုပ်ဘဲနဲ့ သူ့ဟာသူ နဂိုရ်ကသောင်တင်တာကိုရှင်းနိုင်ဘို့
တရုပ်ဆီက သောင်ရှင်းသင်္ဘော၁၉ စီးကို နှုန်းသက်သာတဲ့ချေးငွေနဲ့ဝယ်
ပြသနာကြီးမဟုက်ပါ ဖြေရှင်း ပြီးသားပါ၊ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊
သောင်ရှင်းသင်္ဘောရှိတယ်၊ အရံ အနေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်၊အကြောက်
USယူအက် ဒေါ်လာ သန်း ပေါင်း ၃ သောင်း US $ ( ၃၀,၀၀၀,၀၀ဝ ဝ၀၀)ကုန်ကျမဲ့
မှာ ခုနှစ်ပိုင်းရှိပြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်ဧရာဝတီမြစ်တလျောက်မှာလုပ်ဘို့ပါ၊၊
၎င်းတို့ အနက်မှ မြစ်ဆုံရေကာတာ က တ စိတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်၊
Chibwe ဂျီဗွေရေကာတာ တခု ကသာ လည်ပတ်နေတယ်၊
ပိုင်ဆိုင်မှု အစုဝင် %
ယူနန် စီပီအိုင် …CPI…………………၈ဝ %
မြန်မာ လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ၁၅ % (အခမဲ့ရလိုက်တယ်)
မြန်မာအာရှကမ႓ာ Asia World………… ၅ %
MegaWatt (MW) မီဂါဝတ် စုစုပေါင်း ၂၀,၀၀ဝ အနက် မြစ်ဆုံ
က မီဂါဝတ် ၆,၀၀ဝ ထုတ်ဘို့ ရှိပြီး၊
မြန်မာက (ယင်း ၆,၀၀ဝ မီဂါဝတ်) ရဲ့ ၁ဝ % (၆၀ဝ မီဂါဝတ်)ကို အခမဲ့ အဖြစ် ရမယ်၊
ကျန်လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၉ဝ % (၅,၄၀ဝ မီဂါဝတ်) ကို တရုပ်ပြည်ဆီတင်ပို့ရောင်းချမယ်၊
(ရောင်းတယ် ဆိုတာ တရုပ်က လျှပ်စစ်အား ၉ဝ %ကို ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတယ်၊ မြန်မာကသာ
၁၀% အင်အားကို အခမဲ့ရလိုက်တယ်၊ ရောင်းရငွေပေါ် မြန်မာကအခွန်ကောက်ပြီးနောက် လည်ပတ်မှု
စရိတ်တွေနှုတ်ကာ အသားတင် ထဲက မြန်မာ၊တရုပ်၊အာရှ ကမ႓ာ Asia World အသီးသီး က ထပ်ခွဲယူအုန်း
၁ဝ % ၉ဝ % အသာလွတ် ခွဲဝေတယ် ဆိုတာ က စိတ်ကြွအောင် စကားကို လှည့်ဖြားလုပ်ကြံ
အဲဒီ အကျန် ၉ဝ % စွမ်းအား ထဲက မြန်မာက မဝယ်လို ငြင်းပယ်မှသာ တရုပ်ပြည်ကို
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VIII –
ကတင်ပြသလို ဒီ အခမဲ့ရမဲ့ ၆၀ဝ မီဂါဝတ်ကို ရန်ကုန်မှာ
လိုအပ်နေတဲ့၂၈ဝ မီဂါဝတ် အတွက်ဖြည့်ဆည်းကူညီနိုင်တယ်
ဒါတောင် တရုပ်နဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်တဲ့ ရွှေလီ ရေကာတာ က လျှပ်စစ်စွမ်းအား
တွေကြောင့် ရန်ကုန်က တော်သေးရဲ့ဆိုတာ အနောက်ဩဇာခံမီဒီရာ က ဘယ်ပြောမလဲ?
တရုပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ ပဲခူး ရွှေကြင်ရေကာတာ က ၂၀၁၁ မှာပြီးစီးခဲ့တယ်၊
၎င်းမှ ရေအားလျှပ်စစ် ၂၆၂ KW ရကာ ရန်ကုန် အပါအဝင်သုံးရလို့အဆိုးသက်သာ)
မြန်မာ က အခမဲ့ ရမဲ့ ၁ဝ % (၆၀၀ မီဂါဝတ်) ဟာ ၂၀၁၁ က မြန်မာ
တပြည်လုံးသုံးစွဲလိုက်တဲ့ တနှစ်လုံး ရဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအားပါ၊
အနှစ် ၅ဝ ခွင့်ပြုချိန်မှာ မြန်မာက ယူအက် US$ သန်းပေါင်း ၅၄၀၀၀
ရမယ်၊ US $ ၅၄,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀၊ တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွါးရေးကိုတအား တွန်းအား
နှစ် ငါးဆယ် ပြီးရင် မြန်မာအစိုးရက မြစ်ဆုံရေကာတာ ကို လုံးလုံးလျားလျားပိုင်ဆိုင်
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက စုစုပေါင်း ဝင်ငွေရဲ့၆၀% ယူအက်US $ ၅၄ ဘီလျံ ရမယ်
(တရုပ်နိုင်ငံက၄ဝ % ယူအက် US$ ၃၆ ဘီလျံ ရနိုင်မယ်
Asia World က ဒီ ၄ဝ % ထဲကဝေယူနိုင်တယ်၊လောလောဆယ် မသေချာ)
မြန်မာအစိုးရက CPI စီပီအိုင် ထက် ပိုရမယ်
$ ရာတန် တ ရွက်$ ၁၀ဝ နဲ့ ရာတန် ရွက် တရာUS $ ၁၀၀၀၀
ရာတန် ရွက် တရာ US$ ၁၀,၀၀ဝ အထုပ်တွေ၊
အထုပ် တစ်ရာ ထုပ်US $ ၁ မီလျံ ($ ၁ဝ သိန်း)(၁,၀၀၀,၀၀၀$)
$ ရာတန် နဲ့ $ မီလျံ အထုပ် လုပ်ပြီး
၁၀ဝ မီလျံ $ ရဲ့ အရွယ်ပမာဏ (၁၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ $)
အမျိုးသမီးထိုင်ခုံSofa စိုဖာ က ၄၆.ရ မီလျံ $၊
ရာတန်$ ရွက်တွေမှ ၁ ဘီလျံ$ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ $)
နှစ် ၅ဝ မှာ မြန်မာက ၅၄ ဘီလျံ $ ရမယ်၊
ပုံပါ ၅၄ ကြိမ် ၅၄ ဆပါ၊
ဒုတိယံပိ နှစ်၅ဝမှာမြန်မာက ၉ဝ ဘီလျံ $ ရမှာ၊
တတိယံပိ ၂၅ နှစ်ဆိုရင် ၄၅ ဘီလျံ $ ရမယ်။
(ဒါကြောင့် ဒုတိယံပိ ၅ဝ နှစ်မှာ တရုပ် ရမဲ့ ၃၅ သို့ ၃၆ ဘီ လျံ $ ကို
မြန်မာအစိုးရကဘဲ ရလိမ့်မယ် လို့ခန့် မှန်း – အနှစ်၅ဝ နှုန်း၊
တတိယံပိ၂၅ နှစ်ဆိုရင် တဝက်နှုန်းနဲ့ ၁၈ ဘီလျံ $ လို့ခန့်မှန်း)
မြန်မာငွေနဲ့ဆို ၁၀၀ဝ ကျပ် ကျော် နဲ့မြှောက် ပြီး
Trillion တရီးလျံ ပုံကိုကျပ်နဲ့ဘဲဟန်ဆောင်ကြည့်ပေါ့
တရီး လျံ ကျပ် တို့ရဲ့ ၅၄ ဆ ရှိမှာပါ၊
၂၀၁၅ ခု ဇွန်လ ၅
ကိုယ့်ကိူ ကူမှာ မဟုတ် အကြိုးရှီမှာမဟုတ်
မစ်ဆုံဟာ တရုတ်ပဲအကျိုးရှိတာ မြန်မာက ရမှာဆိုးကျိုးချည်းပဲ
ဧရာဝတီနဲ့ သဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှာလည်း %များပါလိမ့်မယ်
ဒီမြစ်စုံတကယ်တည်ဆောကပြီလဲ လက်ရှိမြန်မာလူမျိ ုးတွေရရှိအကျ ိုးကနဲနဲ
တရုတ်က 80 % အစိုးရက 15 % ဦးပိုင်က5% ။ ကဲ …
ကိုယ့်နိုင်ငံ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်းနှုန်းရမှာလဲ ဖြေပါဦး
…… အခု မြစ်ဆုံမှာ မြန်မာ ဘယ်လောက် တရုတ် ဘယ်လောက် ရမှာလဲ။
အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေပုံ မျှတရဲ့လား။ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးပါ၊
ဝင်ငွေကပြည်သူပြည်သားခံစားရရင်တော်ပါရဲ ့ခရိုနီလက်ထဲရောက်လို ့ချမ်းသာတဲ ့
သူ တို ့ပထွေးတရုပ်တွေကကြိးဆယ်ရာနှုန်းယူမှာကိုတိုင်းပြည်
……. ရေးရေး အကျိုး အမြတ် ခဲ္ဓဝေမှူက ငါတို့ ပြည်သူတ္ဓေအတ္ဓက်က
မယားငယ် လစာ လောက်တောင် မရတ။
မြန်မာ ၉၅% တရုပ် ၅%လုပ်ချင်လုပ်လေ
၈ဝ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းသူ့နိုင်ငံကိုပို့မည်ဆိုတာကရောမှန်ပါသလား
တခါတလေ ကျောင်ကျီးတို ့လို ဘားမှ နားလည်ပဲ ဖင်ပိတ်ကန် ့ကွက်နေတာတွေ မြင်ရင် အားကျီး ဆိတ်ပိန်တယ်